HORDHAC: Arsenal Vs Burnley – 9 Rikoor oo ay qasab tahay Inaad kulankan ka ogaato, Saadaasha Qabiir Lawra & Shaxda Wenger | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » HORDHAC: Arsenal Vs Burnley – 9 Rikoor oo ay qasab tahay Inaad kulankan ka ogaato, Saadaasha Qabiir Lawra & Shaxda Wenger
HORDHAC: Arsenal Vs Burnley – 9 Rikoor oo ay qasab tahay Inaad kulankan ka ogaato, Saadaasha Qabiir Lawra & Shaxda Wenger	Kooxda Arsenal ayaa isha ku haysa iney guul weyn ka gaarto naadiga Burnley si ay ugu dhawaato hogaanka sare ee horyaalka Ingiriiska.
Macalin Arsene Wenger ayaa doonaya inuu shax adag kala hortago Burnley taas oo aan waligeed garoonka Emirates aanan wax guul ah kusoo gaarin.
Kulanka: Arsenal Vs Burnley
WAQTIGA: Axad: 5:15pm Xiliga geeska Afrika
Halka aad ka dawan karto: Sky Sports 1 Natiijada ciyaarta kala soco Laacibiin.com
Garsooraha ciyaarta: Jonathan Moss
Arsenal ayaa dib usoo dhaweyn doonta sedexda ciyaaryahan ee kala ah Hector Bellerin, Kieran Gibbs iyo Francis Coquelin oo dhaawac kasoo laabtay.
Olivier Giroud ayaa la dhibtoonaya dhaawac anqowga ah laakiin Theo Walcott ayaa la hubaa inuu dhaawac dhanka kubka ah ku seegi doono kulankan.
Burnley sedexdeeda ciyaaryahan ee kala ah Dean Marney, Ashley Barnes iyo Johann Berg Gudmundsson ayaa la filayaa in kulankan ay diyaar unoqdaan kadib markii ay dhaawacyo ku seegeen kulankii ugu danbeeyay eeFA Cup-ka, si kastaba xidiga garabka ka ciyaara ee Scott Arfield ayaa kulankiisii sedexaad oo xariir ah dhaawac muruqa ah ku maqnaanaya.
Kulamada ay iska hor yimaadeen labada koox
Arsenal ayaanan wax guuldaro ah kasoo gaarin Burnley horyaalka Premier League waxaana ay ka badiyeen afar kulan halna bar bardhac ayay galeen, waxaana ay raadinayaan guushii shanaad oo xariir ah.
Burnley ayaan dhankeeda wax gool ah ka dhalin horyaalka Ingiriiska naadiga Arsenal.
RIKOORO UGAAR AH Arsenal
Kooxda Gunners aayaa shabaqa soo taabaneysay 12 kulan ee ugu danbeeyay horyaalka waana markeedii ugu wanaagsanaa.
Dhamaan sedexdii guldaro ee xili ciyaareedkan ku dhacay kooxdan waxaa ay la hormarayeen gool.
Arsenal ayaa hal dhibic ka badan heerkii ay xiligan oo kale taagnaayeen sanadkii hore, laakiin waxaa ay hayeen hogaanka horyaalka, halka Chelsea oo haatan sideed dhibcood ku hogaamineysa ay ka carareysay heerka labaad.
Olivier Giroud ayaa shabaqa soo taabtay sagaalkii kulan ee ugu danbeeyay ee uu kusoo bilowdo dhamaan tartamada, si cajiib ah ayuuna isku dar udhaliyay 11 gool.
Alexis Sanchez ayaa dhaliyay ama abuuray 21 gool xili ciyaareedkan, waana wax ka wanaagsan dhamaan ciyaaryahanada kale ee horyaalka
Burnley ayaa guuleysatay sedex kamid ah afartii kulan ee ugu danbeysay horyaalka.
Burnley ayaanan waligeed ku guuleysan horyaalka Ingirisika magaalada London waxaana laga badiyay 2 kulan halka labo kale ay bar bardhac galeen tan iyo bishii January 1975, markaas oo ay 1-0 kaga badiyeen QPR.
Burnley ayay ku adkaan doontaa iney Arsenal kaga badiso garoonka Emirates Stadium, sidaa dartees Arsenal ayuu qabiirkan saadaaliyay iney 2-0 ku badin doonto
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/hordhac-arsenal-vs-burnley-9-rikoor-oo-ay-qasab-tahay-inaad-kulankan-ka-ogaato-saadaasha-qabiir-lawra-shaxda-wenger/">HORDHAC: Arsenal Vs Burnley – 9 Rikoor oo ay qasab tahay Inaad kulankan ka ogaato, Saadaasha Qabiir Lawra & Shaxda Wenger</a>